vaccin-somaliska - 1177 Vårdguiden
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.
Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.
Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.
Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.
Macluumaadka qoraalka ayaa khuseeya carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Sidee ayaan sameeyaa si aan tallaal ugu helo?
Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey waxa loo soo bandhigayaa tallaal.
Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la’aan ku jooga ayaa bilaash tallaalka loo siinayaa. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta iyo ka shaqeeyaba iyadoo xataa aanu muwaadin Iswiidhish ah ahayn.
Waxa laguu soo jeedinayaa inaad is tallaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.
Qabso balan tallaalka covid-19
Sidan ayaa loo sameeyaa
Ballan qabso Boka tid digitalt
Fiiri waqtiyadeena aad iska so gali gartid adigo ballan qabsan Drop in för vaccination mot covid-19 i Östergötland
Wac 010-105 91 31 markaas ayaad la hadli doontaa xiriiriyayaasha caafimaadka oo af Soomaali ku hadla. Halkan ayaad ka weydiin kartaa su'aalaha ku saabsan tallaalka iyadoo aad caawimo ka heli doonto qabsashada balanta tallaalka.
Waxaad soo wici kartaa maalmaha caadiga ah/shaqada ee aan fasaxa aheyn (isniin ilaa jimce) inta u dhaxaysa saacada 13 iyo 15.
Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa
Waxa tallaalka cirbad lagaa siinayaa cududa. Waxaad u baahan tahay laba cirbadood si aad difaac wanaagsan oo kaa ilaaliya inaad si xun ugu xanuunsato ugu hesho. Dhamaan dadka 18 sanno jir ka weyn ayaa cirbad saddexaad loo soo jeedinayaa. Waxay taasi keenaysaa in difaacu muddo ka sii dheer sii jiro. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.
Waxaad marka cirbada lagu siiyo meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo.
Dhakhtarkaaga ayaa go’aaminaaya haddii aad taas u baahan tahay.
Ma dooran kartid nooca tallaalka ee aad heli doonto.
Waxaad xaq u leedahay inaad markaad is tallaaleyso aad macluumaad shaqaalaha daryeelka caafimaadka ka hesho. Weydii haddii ay jirto wax aad is weydiinayso.
Miyaan is tallaali karaa haddii aan jiranahay?
Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah.
Sidee ayaan ka dib dareemayaa?
Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun iyadoo aad daalan tahay maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxaad sidoo kale noqon kartaa inaad barafoowdo/dhaxamooto, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan. Waxa loo yaqaanaa saameynta xun waxaanay caadi u tahay carruurta iyo dadka waaweyn ee tallaalka covid-19 qaatey.
Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaato khafiif ah iyadoo dhowr maalmood gudahood iska tagta.
Guriga joog ilaa iyo inta aad calaamado leedahay.
Haddii aanay calaamaduhu kaa tagin dhowr maalmood gudahood, ayaad u baahan tahay inaad tijaabo iska qaado.
Saameynta xun ee tallaalka
Malaayiin qof ayaa covid-19 iska tallaalay. Dad aad u tiro yar ayaa tallaalka ka dib yeeshay saameyn aad u xun. Taasi waa wax aan caadi ahaan dhicin. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato.
Soo sheeg saameynta xun ee tallaalka
Waxaad adigu soo wargalin kartaa hey’adda Läkemedelsverket haddii aad ka shakisan tahay in tallaalku uu wax saameyn xun ah kugu keenay. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.
Xitaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa soo sheegaya haddii ay ka shakiyaan in tallaalku uu wax saameyn xun ah keenay.
Macluumaadka ku saabsan saameynta xun ee laga shakisan yahay ayaa lasoo uruninayaa . Waxa ka dibna baaritaan lagu sameynayaa haddii ay xiriir tallaalka la leeyihiin.
Uurka iyo tallaalka
Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa tallaalka laguugu soo jeedinayaa.
Dumar badan oo uur leh ayaa dunida tallaalka covid-19 la siiyey. Waxyeello uma keeneyso ilmaha caloosha ku jira.
Kalkaalisadaada kala hadal si aad ugu ogaato waxa adiga ku khuseeya.
Carruurta iyo tallaalka
Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa.
Malaayiin carruur ah oo adduunka ku nool oo 12 sano jir ka weyn ayaa covid-19 laga tallaalay.
Dadka ka yar 18 sano jir ayaa u baahan kara ogolaanshaha waalidka/daryeelaha si uu tallaalka ugu helo. La xiriir qof jooga meesha is tallaalistu ka dhacayso haddii aad dooneyso inaad is tallaasho, laakiin aanad ogolaansho haysan.
Qofka hore ugu yeeshay xasaasiyad xun
Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad taas oo aad u baahatay inaad isla maalintaasba daryeel caafimaad raadsato. Waxa taas keeni kara tallaal, dawo ama wax aad cuntay.
Tallaalka si taxaddar leh ayaa loogu kantaroolay
Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Dad badan ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Dad waaweyn iyo carruur tiro badan ayaa tallaalka la siiyey iyadoo cilmi baarayaashu ay daraasad ku sameeyaan saameynta. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo.
Cilmi baadhayaal wadamo badan ka socda ayaa iska kaashaday si tallaalka loo soo saaro. Dalal badan iyo shirkado dunida oo dhan ku yaala ayaa lacag badan galiyay. Sidaa darteed ayaa tallaalka dhakhso loogu soo saaray.
Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo tallaalka ku saabsan. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.
Tallaalku ma saameynayo awooddaada inaad carruur dhasho
Sii wado inaad talada raacdo si loogu yareeyo faafitaanka covid-19
Waa inaad talooyinka xukuumadda raacdo xitaa markaad talaalka hesho ka dib.
Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is tallaasho.
Helena Hervius Askling, Dhakhtarka, khabiirka cudurada faafa